Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Dia ahoana koa ny manaraka ?
Inty sy Nday: Dia ahoana koa ny manaraka ?
Azo antoka fa tsy maintsy hahazo fankatoavana eny anivon’ny Antenimierandoholona iny tolo-dalàm-pifidianaa nahabe resaka teny amin’ny Antenimierampirenena iny, ary hoeken’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana, ary havoakan’ny filohampirenena hanan-kery. Noderain’ny olona maro ny fihetsika nataon’ireo solombavambahoaka 73 avy amin’ny Tim sy ny MApar ary ny tsy miankina maromaro, izay tsy nanaiky hitsikombakomba sy ho tompon’antoka tamin’ny fankatoavana azy iny teny Tsimbazaza. Ny raharaha iray hafa momba ny heloka manodidina ny kolikoly izay efa nandefasana taratasy teny amin’ny Bianco momba iny raharaha iny koa dia miandry ny maro.
Fa na nisy na tsia ny kolikoly, ary na hisy fepetra horaisin’ny Bianco sy ny “Chaine Pénale anti-corruption” momba izany na tsia, dia misy raharaha pôlitika andrasan’ny maro amin’ireo ankolafin-kery nanohitra na tsy nankato an’iny tolo-dalàm-pifidianana iny. Tsy rariny mantsy raha vitan’iny fihetsiketsehana teny Tsimbazaza iny ny anjaran’ireo depiote nkitsipaka azy iny. Ka inona ary ny tohiny, dia ahoana koa ny manaraka ?
Hamory vahoaka ve ianareo depiote 73 sa handresy lahatra ny ankolafin-kery misy anareo avy fa tsy handray anjara amin’ny fifidianana hotanterahina amin’ny alalan’io lalàna io sa hanao inona ?
Aza manao sinema fa mahasahia mandray andraikitra e !